रुसी सेना द्वारा युक्रेनको राजधानी घेराउ, के छ अबस्था ? — Imandarmedia.com
रुसी सेना द्वारा युक्रेनको राजधानी घेराउ, के छ अबस्था ?
एजेन्सी। युक्रेनको रक्षा मन्त्रालयले रुसी सेनाहरु राजधानी किभसम्मै आइपुगेको जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयले ट्विटरमार्फत् रुसी सेनाहरु राजधानी किभमै घुसेर आक्रमण गर्न थालेको जानकारी दिएको हो।
खबरअनुसार रुसी सेनाले क्रुज क्षेप्यास्त्रहरु हानेका छन्। सैन्य ठेगाना र हतियार भण्डार क्षेत्रहरुमा बमहरु खसाइएको छ।रूसी सेनाहरुले देश नै कब्जा गर्ने अवस्था आएपछि युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले पश्चिमा राष्ट्रसँग सैन्य सहायता माग गरेका छन्।
यद्यपी रुसमाथि आर्थिक प्रतिबन्धको घोषणा मात्र भएको छ। अमेरिकाले अमेरिकी सेना कहिल्यै युक्रेन नजाने बताएको छ। तर नेटोमा आवद्ध मुलुुकहरुमा रुसले आक्रमण गर्न थाल्यो भने अमेरिकाले रुसमाथि युद्ध थाल्ने राष्ट्रपति जो बाइडेनको भनाइ छ।
रुसले तेस्रो पक्ष आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न आइपुगे उसलाई पनि आफूले नछाड्ने चेतावनी दिएको छ। सोभियत संघको पतनपछि सन् १९९१ मा युक्रेन रुसबाट अलग भएको थियो। त्यसयता युक्रेनले पश्चिमा राष्ट्रसंग लगातार सम्बन्ध बढाएको छ जुन रुस रुचाउँदैन।
तेस्तै, रुसले पूर्ण रुपमा युक्रेनविरुद्ध आक्रमण थालिसकेको छ। रुसी सेनाहरुले युक्रेनको राजधानी किभमै घुसेर आक्रमण थालिसकेका छन्।यसबीचमा युक्रेनले आफ्ना देशका हरेक नागरिकलाई हतियार उठाउन आह्वान गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको लागि पनि युक्रेनले अपिल गरिरहेको छ। रुसले आक्रमण गरिरहेको समयमा रुसी विदेशमन्त्री सर्गी लाभरोभले भने आफ्नो देशको उद्देश्य युक्रेन कब्जा गर्ने नभएको बताएका छन्।
शुक्रबार लाभरोभले रुसको उद्देश्य युक्रेनलाई दमनमुक्त गर्नु मात्र भएको बताएका छन्। दमनबाट मुक्त भएपछि मात्र युक्रेनका नागरिकले देशको भविष्य निर्धारण गर्नसक्ने उनको भनाइ छ।
हालको युक्रेन सरकारलाई रुसले लोकतान्त्रिक सरकार नमान्ने पनि लाभरोभको भनाइ छ। युक्रेन अमेरिकाको नेतृत्व रहेको सैन्य गठबन्धन नेटोमा आवद्ध हुन चाहेपछि रुस युक्रेनविरद्ध चिढिएको हो। परिणाम स्वरुप त्यहाँ आक्रमण नै भइसकेको छ।
तेस्तै, युक्रेनले सर्वसाधारण नागरिकलाई पनि हतियार बाँडेको जनाएको छ। राजधानी किभसम्मै रुसी सैनिक आएपछि जुनसुकै उमेरका नागरिकलाई सेनामा भर्तीहुन यक्रेनको विदेशमन्त्रालयले आह्वान गरेको छ।
अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार युकेनी सेनाले राजधानी किभमा मात्र १८ हजार भन्दा बढी घातक हरियार सर्वसाधारणलाई बाँडेको छ। रुसले आक्रमण गर्ने आशंकाबीच राजधानी किभका सडकहरुमा सैनिक तयारी अवस्थामा राखिएको छ।